Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်က မြန်မာပြည်သူများကို ကူညီရန် ဆန်ဖရန်ဘေးမြန်မာမိသားစုများ ရန်ပုံငွေအလှူပွဲကျင်းပမည်
၊ ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၂
မြန်မာပြည်အရေးတွင် အစဉ်လက်မနှေး တက်ကြွစွာ ကူညီဆောင်ရွက် လှူဒါန်းလေ့ရှိသော ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာမိသားစုများက လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်အထွေထွေဘေးဒုက္ခများကို ရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရသော မြန်မာပြည်သူများကို ကူညီအားပေးရန် ဈေးပွဲတော်ကို ကျင်းပပြီး အလှူခံကြမည် ဖြစ်သည်။
လာမည် ဇူလိုင်လ ၈၊ ကျင်းပနေကြ Newark Pavilion, Thornton Ave, East Bay ကွန်မြူနီတီရိပ်သာတွင် မနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ် မြန်မာနှင့် အာရှရိုးရာ စားသောက်ဖွယ် ဈေးပွဲတော် ကျင်းပပြီး လက်ခံရရှိသော ဈေးရောင်းရငွေအားလုံးကို မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ရခိုင်ပြည်သူများကို အားပေးကူညီနေသော နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)အဖွဲ့ကြီးကို အမှူးပြုပြီး လှူဒါန်းမည် ဖြစ်သည်။
ကြိုတင် အလှူခံသည့် မုန့်စားလက်မှတ် (Food Coupon) တစောင်ကို အမေရိကန် ၅ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ယခုကတည်းက စတင်ရောင်းချနေပြီး၊ ယခုလက်ရှိ မုန့်ဈေးတန်း လာရောက်ဖွင့်လှစ်မည့် မြန်မာမိသားစု အလှူရှင် ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၁၅ ဆိုင် ကျော်ပြီဟု သိရသည်။
ဘေးဧရိယာရောက် မြန်မာကွန်မြူနီတီသည် မြန်မာပြည်ကူညီရေး ဈေးရောင်းပွဲတော်များဖြင့် အလှူခံပြီး တက်ကြွစွာ ကူညီ အားပေးသည့် အစဉ်အလာဖြင့် ထင်ရှားသည်။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များ ကူညီရေး၊ ၂၀၀၈ နာဂစ်ဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များ ကူညီရေး၊ နှစ်တိုင်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို ၂၀၁၀ ပဲခူးရေ အငတ်ဘေးသင့်သူများ ကူညီရေး၊ ၂၀၁၀ ရခိုင် ဂီရိမုန်တိုင်းသင့်သူများ ကူညီရေး၊ ၂၀၁၁ ဧရာဝတီအရေး၊ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးသင့်သူများ ကူညီရေး စသည့် အရေးပေါ် အလှူဒါနလှုပ်ရှားမှုများကို အများပြည်သူ အင်အား၊ အများ ပြည်သူ ကောင်းမှုအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
ယခုလည်း ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းကာလ ရခိုင်ပြည်က ဒုက္ခသည်ပြည်သူများအတွက် ကိုယ်စွမ်းနိုင်သမျှ အများပြည်သူကောင်းမှု ပြုကြမည်ဖြစ်ရာ မိုးမခမှ တဆင့်လည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။ ၅ ဒေါ်လာတန် မုန့်စားလက်မှတ်များကို အလှူအဖြစ် ၀ယ်ယူ အားပေး ထည့်ဝင်လိုပါက မိုးမခမှ တဆင့်၎င်း၊ ပိုစတာပါ ဖုံးနံပါတ်များမှ တဆင့်၎င်း မှာယူပါ။ စာတိုက်ကနေ ၃ ရက်အတွင်း ရောက်အောင် ပို့ပေးမည်။ စာတိုက်ခကို မိုးမခက လှူပါမည်။
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်က မြန်မာပြည်သူများကို ကူညီရန် ဆန်ဖရန်ဘေးမြန်မာမိသားစုများ ရန်ပုံငွေအလှူပွဲကျင်းပမည် . All Rights Reserved